मेसीबिना बार्सिलोनाको भविष्य के होला? - खोजतलास
युरोपको क्लब फुटबलमा बार्सिलोनालाई प्रसिद्ध टिमका रूपमा लिइन्छ। यो टिमबाट धेरै क्षमतावान् खेलाडीहरूले आफ्नो इतिहास रचेका छन्। इतिहास रच्नेहरूको अग्रपंक्तिमा उत्कृष्ट जादु देखाउने लियोनल मेसीलाई लिइन्छ।
यिनै महान खेलाडीले क्लबको पोल्टामा धेरै उपाधि पनि दिलाएका छन्। अर्जेन्टिनामा जन्मिएका भए पनि उनले क्लब फुटबलमा आजका दिनसम्म बार्सिलोनाबाट मात्र खेलेका छन् र अब उनले फुटबल खेल्न धेरै दिन बाँकी छैन।
स्पेनको घरेलु लिग ‘ला लिगा’ मा बार्सिलोनालाई एउटा सशक्त टिमको रूपमा हेर्ने गरिन्छ।
पछिल्ला दिनमा बार्सिलोनाको सफलतामा मेसीको योगदान झन् उल्लेखनीय छ। सन् २००४ को कुरा हो, जब १७ वर्षे ठिटो मेसी पहिलो पटक बार्सिलोनाको जर्सी लगाएर मैदानमा उत्रिएका थिए। कोही पनि फुटबल ‘पण्डित’, प्रेमी, समर्थक वा प्रशंसकले सोचेका थिएनन् होला, १७ वर्षीय ठिटोले अर्जेन्टिनाको रोजेरियोमा जन्मिएर बार्सिलोनासम्म आई त्यति ठूलो इतिहास बनाउला भनेर।
फुटबलका भगवान सरह मानिने मेसी नै ‘ला पुल्गा’ उपनामले चिनिन्छन्, अर्थात बाधा छलेर उम्किन सक्ने सानो कीरा। हरेक डिफेन्डरका माझबाट सजिलै छिर्न सक्ने मेसीले आधुनिक फुटबलमा अत्यधिक प्रभाव पारिरहेका छन्।
हरेक वर्ष फ्रान्स फुटबल एसोसिएसनले प्रदान गर्ने ‘बालोन डि अर’ विश्वकै उत्कृष्ट फुटबलरलाई दिइन्छ जुन मेसीले छ पटक जितेका छन्। उनका प्रतिद्वन्द्वी क्रिस्टियानो रोनाल्डोले ५ पटक जितेका छन्।
मेसीले क्लबमा आएपछि ४८५ खेलमा ४४४ गोल गर्न सफल भएका छन्। यो तथ्यांक आफैंमा एउटा अद्भुत सत्य हो। सन् २०१२-१३ को सिजनमा त फुटबल पण्डितले मेसीलाई ‘एलियन’ अर्थात् अर्को ग्रहको मानिस भनेर उपनाम दिएका थिए। उनले त्यो वर्ष मात्रै ९१ गोल गरेका थिए।
अहिलेका पेसेबर फुटबल खेलाडीहरूको खेल हेर्दा फुटबल इतिहासको यो रेकर्ड सहजै तोडिएला जस्तो लाग्दैन। यदि यो रेकर्ड कुनै खेलाडीले भंग गर्ने सामर्थ्य राख्छ भने ऊ स्वयं अर्को महान खेलाडी हुनेमा दुई मत छैन।
आफ्नो खेल जीवनमा हालसम्म मेसीले बार्सिलोना प्रतिनिधित्व गर्दै कुल ३३ विभिन्न ट्रफी उचालेका छन्। यति धेरै सफलता पाएका मेसीको हकमा विधिको बिडम्बना भनौं या भाग्यको खेल भनौं, क्लब स्तरमा सबै खाले उपाधि हात पारेका मेसीले आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्दै विश्वकप तथा कोपा अमेरिकाको फाइनलसम्म टिमलाइ पुर्‍याए पनि हालसम्म अर्जेन्टिनालाई कुनै अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि दिलाउन सकेका छैनन्।
उनका समकालीन प्रतिस्पर्धी रोनाल्डोले पोर्चुगलका लागि युरोपियन च्याम्पियनसिपको उपाधि दिलाउन सफल भए। तर, मेसीकै देशका महान फुटबल खेलाडी म्याराडोनाको जादुमयी खेलको भरमा विश्वकप जितेको अर्जेन्टिनाले मेसीको कालखण्डमा यो इतिहास दोहोर्‍याउन नसकेकै कारण उनलाई रोनाल्डो वा म्याराडोनासँग तुलना गर्ने एउटा प्रमुख आधार सधैं खड्किने छ।
बायाँ खुट्टाले बल अघि बढाउँदै मैदानको बीचभागबाट डिफेन्डरलाई छलाउँदै लैजाने मेसीको लोभलाग्दो क्षमता हो। दर्जनौं यस्ता गोल गरेका मेसीको जस्तो जादुमयी कला भएको अर्को महान फुटबलका तारा, बार्सिलोना क्लबले पाउने संकेत हालसम्म देखिएको छैन।
बार्सिलोना र मेसीको सम्बन्ध अटूट छ। क्लब र उनको १७ वर्षे मितेरीमा धेरै साथीहरूको साथ मेसीलाई रह्यो। इनिष्टा, जाभी, पुयोल, रोनाल्डिन्हो जस्ता क्षमतावान साथीबाट पाएको पासलाई मेसीले कलात्मक ढंगले जाली चुमाउँथे। मेसीले सहकर्मी खेलाडीलाई गोल गर्नमा पनि ‘असिस्ट’ गर्ने हैसियत राख्छन्।
विश्व क्लब फुटबल इतिहासमा अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट तीन साझेदारी भनेर मेसी, स्वारेज र नेमारलाई भनिन्छ। सँगसँगै खेलेका यी तीनले बार्सिलोनाको फुटबल इतिहासमा तहल्का मच्चाएका थिए। ‘एमएसएन’ (मेस्सी, स्वारेज, नेमार) नामले चर्चित साझेदारीले सन् २०१५-१६ को सिजनमा सबै उपाधि जित्दै बार्सिलोनालाई ट्रेबल अर्थात् घरेलु लिग ला लिगा, कोपा डेल रे र युरोपको सबभन्दा ठूलो प्रतियोगिता च्याम्पियन्स लिग जिताएका थिए।
अझ पछिल्ला दिनमा त फ्री-किकलाई सही निशाना दिएर गोलमा परिणत गर्ने कलामा मेसी अर्को जादुगर बनेका छन्। यो हेर्दा मेसीपछि बार्सिलोनाको दरिलो उत्तराधिकारी को होला भन्ने कौतुहलता छ।
मेसीले बार्सिलोना क्लब छाडेपछि १० नम्बर जर्सीमा को मैदानमा आउला, निश्चित छैन। बार्सिलोना र मेसीको सम्झौता अब जम्मा एक वर्ष मात्र बाँकी छ। त्यसपछि मेसीले बार्सिलोनाबाट पुनः खेल्ने हुन् वा होइनन्, हाल त्यो पनि निश्चित छैन। बार्सिलोनालाई धेरै खेलमा बचाएका र चम्काएका मेसीले आफ्नो विरासत कसलाई सुम्पेर जालान्, भन्ने पनि अनिश्चित छ।
उनीजस्तो अद्भुत कला–क्षमता र प्रतिभा भएका खेलाडी के बार्सिलोनाले फेरि पाउला? मेसीको बार्सिलोनाबाट अवकाशपछि टिम कतै इटालीको एसी मिलानको पथजस्तै वा एलेक्स फर्ग्यूसनको अवकाशपछिको म्यानचेस्टर युनाइटेड जस्तो त हुने हैन भन्ने डर पनि छ।
मेसी फुटबल जति कलात्मक रूपमा खेल्छन्, उनी मैदानभित्र र बाहिर अनुशासनका लागि पनि उत्तिकै उदाहरणीय मानिन्छन्। अनुशासित शैलीकै कारण तुलनात्मक रूपमा मेसीलाई अरू खेलाडीभन्दा फरक रूपमा हेरिन्छ। मैदानमा मेसी कसैप्रति व्यक्तिगत रूपमा आक्रामक देखिँदैनन्। तर उनको खेलशैली सधैं आक्रामक हुन्छ।
शालीन व्यक्तित्वका धनी मेसीको जादुमयी खेललाई बार्सिलोनाले कहिले पनि बिर्सने छैन। बार्सिलोना क्लबको इतिहासमा उत्कृष्ट खेलाडी भइकन लगातार एउटै टिममा स्थान बनाइराख्नु पनि चानचुने होइन। बार्सिलोना फुटबल एकेडेमीले नै जन्माएको मेसी आजका दिनसम्म बार्सिलोनामा छन् र भविष्यमा उनले के गर्लान् बताउन सकिँदैन। तर बार्साको खेल इतिहासमा मेसीको जस्तो ख्याति र उनको जस्तो रेकर्ड सायदै कुनै खेलाडीको हुन सक्ला।
हालसालै बार्सिलोनाले जर्मन फुटबल क्लब वायर्न म्युनिकसँगको लज्जास्पद हार बेहोर्‍यो। अब लगभग फुटबल खेलमा संन्यास लिने संघारमा पुगेका मेसीपछि बार्सिलोनाको भविष्य कस्तो हुने हो, फुटबल पण्डितहरू जिज्ञासु छन्।
वास्तवमा क्लब फुटबल एक जनाको योगदानले मात्र सफल हुने होइन। यसमा सम्पूर्ण खेलाडी, टिम म्यानेजरहरूको उत्तिकै महत्वपूर्ण हात हुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि खेल जित्नका लागि खेलिन्छ। खेल जित्न गोल गर्न जरूरी छ। गोल यस्ता खेलाडीले मात्र गर्न सक्छन् जोसँग गोल गर्ने क्षमता हुन्छ।
बार्सिलोना फुटबलमा दक्ष खेलाडी भएको क्लब भएकाले मेसी बिनाको टिम पनि उत्तिकै सशक्त हुने आशासम्म गर्न सकिन्छ। तर फुटबल इतिहासको पछिल्ला दिन नियाल्दा कैयौं देशका अर्बपति, अरेबियन र चिनियाँ धनाढ्यहरूले युरोपियन क्लबमा लगानी बढाइरहेका छन्। जुन ठूला क्लबहरूमा यिनीहरूको लगानी छ, त्यो क्लबको हतपत खेल नहार्ने अवस्था हुन्छ र मेसीको बिदाइपछि क्लबमा दह्रै लगानी गर्नपर्ने देखिन्छ।
बार्सिलोनासँग मेसीले नयाँ सम्झौता गरेनन् भने वा अवकाश लिए भने उनको क्लब फुटबलको इतिहासमा पूर्णविराम लाग्ने छ। अर्थात् एउटा यस्तो बेलामा मेसीको क्लब फुटबलबाट विश्राम हुने स्थिति छ, जतिबेला बार्सिलोनाले उत्कृष्ट नतिजा दिन सकिरहेको छैन।
यसैले पनि मेसी बिनाको बार्सिलोनाको खेल कस्तो हुने हो, जिज्ञासा छाएको छ।
2020 August 25 6:50 pm
कोरोना भाइरसका कारण एन्फाको साधारणसभा स्थगित
रोमाञ्‍चक बन्दै च्याम्पियन्स लिगका अन्तिम आठका खेल